အသောက်များသွားလို့ ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ပြဿနာကို ပြေလည်စေနိုင်မယ့်အချက် (၆) ချက် - YOYARLAY Digital Media and News
TGIF တွေ TGIS တွေမှာသောက်ပြီးလို့ တနင်္ဂနွေဆို ပြဲကွဲနေပြီလား အဲလေ မထနိုင်ဖြစ်နေပြီလား?… သောက်တာလည်းမများဘဲ အရက်နာကျနေပြီလား? တနင်္လာ အလုပ်သွားဖို့ရော ထနိုင်မှာကျိန်းသေရဲ့လား? မပူပါနဲ့…ယမကာတွေကစ်တာများပြီး ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ပြဿနာကို ခဏချင်းပြေလည်သွားမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။
ကြုံလို့ပြောရရင် အရက်နာကျတယ်ဆိုတာ ဗိုက်ထဲဘာမှမရှိဘဲသောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဖြစ်တာပိုများတယ်တဲ့နော်.. အဲ့တော့ မသောက်သေးခင်အရင်စားပါ… ဒီအချိန်မှာ “Eating is Cheating” တွေ ဘာတွေမေ့ထားလိုက်တော့…။ “အရက်နာမကျစေဖို့ အရင်ဝအောင်စားကြစို့” တွေ ဘာတွေပဲ တွေးတော့ 😛 ။ ကဲ.. ဒါလည်း မရပါဘူး.. အရက်နာကတော့ ကျနေတာပဲဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါလို့…။
အရက်သောက်နေတုန်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အဲ.. သောက်ပြီးရင်လည်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အရက်နာကျနေလည်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ပေါ့လေ။ ညက သောက်ထားတဲ့အရှိန် မနက်ထိ အကင်းမသေသေးဘူးလား… မူးမြဲ မူးဆဲလား? ရင်ပူမြဲ ပူဆဲလား? ရေကိုပဲ အရင်သောက်ပါ။ သောက်နိုင်သလောက်သောက်ပါ… အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ရင်ပူတာနဲ့ မူးတာ သက်သာသွားမှာပါ…
ရေမသောက်ချင်ဘူးလား ရတယ်… Sports Drinks တွေ၊ အုန်းရည်တွေ၊ စွပ်ပြုတ်ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးတွေ သောက်ပါ။ တကယ်တော့ အရက်နာကျတာကို ဖြေရှင်းဖို့ ရေတစ်မျိုးတည်းနဲ့ မလုံလောက်တာပါ။ ဒီလို အရည်တွေက အရက်သောက်ရင်း ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ဆားဓာတ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက် အချိုဓာတ်ပါတဲ့ သကြားရည်တို့လို ဂလူးကို့စ်တို့လို အရည်မျိုး သောက်ပါ။
၃။ အဆီများတာ စားပါ
မနောက်နဲ့.. မနောက်နဲ့… အရက်နာကျနေပါတယ်ဆိုကာမှ ဘယ့်နှယ် အဆီများတာတွေ လာစားခိုင်းတုန်း… အဲ့လိုအချိန် အဆီကို မြင်တောင်မမြင်ချင်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ စားခိုင်းတာကလည်း အရက်နာကျမှမဟုတ်ပါဘူး။ မသောက်ခင် စားခိုင်းတာပါ။ အကောင်းဆုံးက သံလွင်ဆီ (ဟင်းချက်တဲ့ဟာနော်.. ဆံပင်လိမ်းတဲ့ဟာ မဟုတ်) တစ်ဇွန်းကို အရက်မသောက်ခင် မော့သွားပါ။ သံလွင်ဆီကြီး ဖွီ.. ဖွီ.. အရသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့် မသောက်ခင် ပီဇာတို့ ဘာတို့လို အဆီများတဲ့ဟာမျိုးတွေ ကြိတ်သွားပါ။ ကြားဖူးတယ်ဟုတ်… အရက်မသောက်ခင် ထောပတ်စားခိုင်းတာမျိုးလေ.. တကယ်အသုံးဝင်တယ်နော်… ပီဇာတွေ ဘာဂါတွေကျတော့ အရက်နာကျတာကိုလည်း သက်သာစေတာမို့ သောက်ပြီး နောက်မနက်မှ စားလည်း အဆင်ပြေပါတယ်.. ကုန်ပေါက်တော့ များတာပေါ့။
အရက်သောက်ပြီဆို အချို့တွေ သိပ် ဥဩဆွဲတတ်ကြပါတယ်… (အန်တာကိုပြောတာပါ) ဒါဟာလည်း အရက်နာကျခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ ချင်းက ကယ်တင်ရှင်ပါ။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ချင်းကို မအော့မအန်ဖို့ သုံးခဲ့ကြတယ်မလား.. ဒီတော့ မသောက်ခင် ချင်းစားပါ… ဥဩဆွဲခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.. စားခဲ့သားနဲ့ ဥဩဆွဲရင်တော့ ကျွန်တော်မပါ.. ဟီးဟီး.. ဒါတော့ ကိုယ့် လစ်မစ်ကိုယ် သိပေါ့ဗျာ… နော့်… နောက်နေ့မနက်လည်း အန်တုန်းပဲ ညက ချင်းမစားမိဘူးဆိုလည်း မပူပါနဲ့… ချင်းပဲပြေးဝါးပါ ?
မသောက်ခင် အဆီများတဲ့ဟာ စားသင့်သလို သောက်ပြီး အရက်နာကျနေချိန်မှာလည်း စားသင့်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ဟာတော့ မဟုတ်ဘူး ပေါ့လေ..အစာကြေလွယ်မယ့် ဟာလေးတွေပေါ့… ဥပမာ ပေါင်မုန့်ကြမ်းတို့လို ဘာတို့လိုပေါ့… ကျွန်တော်တော့ တုန်ယမ်းဟင်းရည်တွေ ဘာတွေ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးတွေ ကြိတ်တာပဲ :3 အဲ့တော့မှ နည်းနည်း နေသာထိုင်သာရှိတယ် ဟီးဟီး
အရက်နာကျပြီဆို အကောင်းဆုံးက အိပ်တာပါပဲ။ အိပ်ရေးမဝတာက အရက်နာကျခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ အိပ်ရေးဝတာ၊ မဝတာထက် ထကို မထနိုင်တာလေနော်… အဲ့တော့ စောစောက ပြောသလို နိုးတဲ့အချိန် ရေထသောက်၊ ဓာတ်ဆားရည်တွေသောက် လုပ်ပြီးရင် ပြန်အိပ်ပါ။ တစ်နေကုန်အိပ် တစ်မုန်းအိပ်ပေါ့ဗျာ… ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ဟာသူ ကုစားသွားပါလိမ့်မယ်… ကဲ.. ကဲ… အရက်နာကျခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ…။
Previous Previous post: ကွေ့တီယိုအရည်နဲ့ အသုပ်
Next Next post: စမတ်ဖုန်းအဟောင်းတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနည်းများ
ပစ္စည်းတွေကို ရေတွက်တဲ့အခါမှာ တစ်ခု၊ နှစ်ခု စသည်ဖြင့် တစ်ကပဲစပြီး ရေတွက်လေ့ ရှိတာမို့ လက်တွေ့ပိုင်းမှာ သုည ကို ထည့်မစဉ်းစားဖြစ်သလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သင်္ချာဘာသာရပ်နယ်ပယ်မှာတော့ သုည ဟာ အရေးပါတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတစ်လုံးပါ။ သမိုင်းမှာ သုည…
Published: March 14, 20179:00 am Updated: February 6, 20191:59 pm
ခရီးသွားလုပ်ငန်းက နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို တိုးမြှင့်ပေးလို့ နိုင်ငံတော်တော်များများက နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကို တံခါးဖွင့်ကြိုဆိုကြပါတယ်။ Post Views: 3,939
Published: December 11, 20175:04 am Updated: February 8, 201911:37 am